I-Mushmula - isithelo esithakazelisayo nesinambitha, esinempahla eminingi ewusizo.
Indlu yasekhaya Ukupheka Okunye Izithako Izithelo
Ngesikhathi sokuqala ngibona lesi sithelo esithakazelisayo esitolo futhi ngakhipha eshalofini ngenxa yentshisekelo. Njengoba siphendukeke kuzo zonke izinhlangothi, ngiyibuyisele esikhundleni sayo, ngoba ngangingazi ukuthi kwakunjani nokuthi yini eyayidla. Ngifika ekhaya, ngakhuphuka kuyi-intanethi, kuvela ukuthi i-medlar, noma i-lock, noma isikhumba - isitshalo eseningizimu somkhiqizo omhlophe womndeni onesithelo esincane esiphundu nesomuncu. Kulawo angamapayipi, ama-apula, ama-quince, njll. Emazweni asempumalanga, lapho amakhulu amakhulu e-loquat ekhulile khona, izakhiwo zawo eziwusizo ziyiqiniso.
Izakhiwo eziwusizo ze-medlar
Imithi yokwelapha ye-Contralarcations ye-medlar
I-Medlar: izakhiwo eziwusizo nokuphikisana
Manje ungathola umgexo kunoma isiphi isitolo esikhulu. Ungamangazi uma ku-counter ubona "i-loquat yaseMexico noma yaseJalimane" noma "i-loquat yaseMexico". Lezi yizithelo zomndeni owodwa, kodwa zizalwa ngokuhlukile. Imali yaseCaucasia iveza izithelo ekwindla, kanye nemindeni yaseJalimane entwasahlobo. Ngaphezu kwalokho, izithelo zazo ziyahlukahluka ngendlela kanye nokunambitheka, kodwa izakhiwo zabo eziwusizo azithintekile. I-Lokva iqukethe amavithamini A, C, PP, B1, B2, B3, B6. Ngaphezu kwalokho, kunesisindo esikhulu se-zinc, i-calcium, i-potassium, i-phosphorus ne-sodium. Ukwakhiwa kwalo okulinganiselayo nokucebile kunomphumela omuhle emzimbeni wethu:
uqinisa amasosha omzimba futhi unike amandla;
kunciphisa ukucindezelwa kwegazi kanye neshukela;
kuvumela ukugaya futhi kusize ukususa amatshe ezinso;
i-prophylaxis enhle kakhulu yezifo zenhliziyo nezifo.
Kunconywa ukuthi usebenzise i-medlar kubantu abane-asthma, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, njll. Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisa lesi sithelo njalo, uzokwazi futhi ukwehlisa izinga le-cholesterol egazini.
Imithi yokwelapha ye-medlar
izindawo zokwelapha ze-medlar
I-tincture yamathambo edokotela
Izakhiwo eziwusizo zikhona kuphela izithelo ngokwazo, kodwa futhi ziyahamba, futhi ziphazamise, ngisho nemindeni yezintambo. Ngakho amaqabunga namagxolo asetshenziselwa ukwesula isikhumba, futhi izinkuni ziyizinto ezinhle kakhulu kubabazi nababazi. Amathoni asetshenziselwa ukusetshenziswa kwezokwelapha, kanye nabo benza isiphuzo sekhofi. Ukuze benze lokhu, bahlanza, bomisiwe, bandiwe futhi basemhlabathini. Umphumela uba isiphuzo esikhulu kubantu abanesifo senhliziyo. Uma unenkinga nge-digestive tract, ungasebenzisa i-tincture yama-ossicles e-pitted. Thatha ingilazi yamanzi eyodwa bese ufaka ama-20 g wamathambo, ubilise yonke imizuzu engu-15 uthathe isigamu sengilazi esiswini esingenalutho njalo ekuseni. Futhi, benza i-tincture ye-bronchitis. Ebhodini elimnyama ufake imbewu engu-6-7, izipuni ezintathu zobusi kanye no-150 g we-vodka, konke lokhu kufanele kufakwe endaweni emnyama izinsuku ezine.
I-medindi eqondile ye-contraindications ayikho. Kodwa, kuso, nakuzo zonke izithelo ezingavamile, kubalulekile ukuphathwa ngokunakekelwa. Ikakhulukazi kubhekane nezingane ezincane, omama abakhulelwe nabanomsoco. Kungcono ukuqala ukujwayelana naye kusuka kumntwana oyedwa, bese-ke, uma kungenakho ukusabela okwe-allergen, kancane kancane ukwandisa inani lezithelo ezidliwayo. Futhi, hhayi izithelo ezivuthiwe zingakhuphula i-asidi futhi zinikeze umphumela wokukhipha imithi, lokhu kufanele futhi kubhekwe abantu abanezifo zamathumbu. Kungcono ukugwema i-medlar ngendlela yayo eluhlaza, kanye nakuzo zonke izithelo, phakathi nesikhathi sokukhukhumeza kwanoma yiziphi izifo zendlela yokugaya ukudla. Kodwa uma upheka amazambane aphuziziwe, ujamu, u-compote noma u-marmalade, ngeke kube yingozi empilweni yakho. Kunoma yikuphi, kufanele uzame.
Indlela yokudla izithelo zetchi
Indlela yokudla feijoa: kanjani ukudla kahle feijoa
Izakhiwo kanye namagama ezithelo ezingavamile
Dala ingaphakathi lokusentwasahlobo
Ukudla okunomsoco njengengxenye yendlela yokuphila enempilo
I-Julius's Vitamin Phuza ne-Orange
Hlanganisa ama-Strawberry Privorot
I-AIDS, i-hepatitis? Isithombe esisha sikaDima Bilan sashaya i-intanethi
Konstantin Ernst: amaqiniso athakazelisayo okuvela ekuphileni